Momba ny KAIGUAN | Changzhou Kaiguan Packaging Technology Co., Ltd.
Mpanamboatra vokatra KAIGUAN-fonosana
12 taona niainana tamin'ny indostrian'ny fonosana tontolo iainana
Fahaiza-manao manokana ho an'ny orinasanao fampiharana manokana
Changzhou Kaiguan Packaging & Technology Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny tanànan'i Changzhou, faritanin'i Jiangsu, Sina. Io dia eo afovoan'ny delta renirano Yangtze any Sina izay mandroso ara-toekarena miaraka amin'ny fitaterana mety sy ny tontolon'ny logistika ambony. Izahay dia matihanina teknolojia tsy miankina orinasa izay manana traikefa manan-karena amin'ny famolavolana, fampandrosoana, mamokatra malefaka vokatra fonosana.
Mandray teknolojia mandroso eto amin'izao tontolo izao izahay, mampiasa fitaovana fiarovana ny tontolo iainana, manavao ny teknolojia famokarana vokatra fonosana fiarovana vaovao.
Ny vokatra fonosana lehibe ataonay dia ny cheiguroer (kitapo mitsangana ao anaty boaty), cubitainer ldpe, fitoeran-drano azo mikorotsaka, boaty jerry manarona ary milina famenoana.
Amin'ny maha-vokatra fonosana anay vaovao, ny kitapo cheetaher dia vita amin'ny plastika multilayer. Ny sosona ivelany (polyamide + polyethylene) dia miaro amin'ny oxygen sy ny hamandoana; ny hakitroka sy ny firafiny dia mety tsy mitovy arakaraka ny filan'ny mpanjifa na ny vokatra. Ny sosona anatiny (polyethylene) dia elastika ary mahatohitra ny triatra. Izy io dia safidy hafa amin'ny fonosana mahazatra amin'ny famonosana ranon-drazana, manome tombony amin'ny kaontenera henjana sy maharitra maharitra momba ny fitakiana sy fitahirizana fitahirizana. Hitahiry hatramin'ny 80-90% amin'ny fahaizan'ny trano fitehirizana miaraka amin'ny fihenan'ny vidin'ny fitaterana anatiny sy ny fitsitsiana ny entona CO2.
Ny boaty dia namboarina manokana. Satria vita amin'ny baoritra izy io, dia azo atao pirinty ny lafiny rehetra, izay manome faritra velarana fifandraisana lehibe.
Ny orinasanay dia mifehy tanteraka ny rohy rehetra amin'ny kalitaon'ny vokatra hatramin'ny voalohany. manohy fifandraisana maharitra sy maharitra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa izahay, manolo-tena hanao izay hampivoarana ny orinasa maharitra.
Miaraka amin'ny fihetsika misokatra sy tso-po dia manantena ny namana rehetra hanana fifandraisana sy famotopotorana ao amin'ny orinasanay izahay, mamatsy ny vaovao ilain'izy ireo ary manampy azy ireo hamaha ny olan'ny famolavolana.
AUDIT an'ny mpanjifa
Manantena izahay fa hametraka fiaraha-miasa maharitra amin'ny mpampiasa rehetra ho amin'ny ho avy mahafinaritra
Misafidiana Kaiguan, mifidiana kalitao!
Kaiguan-nandray anjara tamim-pahombiazana tamin'ny fampirantiana!
Izay lazain'ny mpanjifanay？
Ny filàn'ny mpanjifa sy ny tolo-kevitra dia ny herinay, ny fahafaham-pon'ny mpanjifa no tadiavinay.
Izahay izao dia manantena ny fiaraha-miasa bebe kokoa amin'ireo mpanjifa ampitan-dranomasina mifototra amin'ny tombotsoan'ny tsirairay.